မောင်ဝံသ ပြောချင်လွန်းလို့ – ( Facebook မှကူးယူပါသည်။ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မောင်ဝံသ ပြောချင်လွန်းလို့ – ( Facebook မှကူးယူပါသည်။ )
မောင်ဝံသ ပြောချင်လွန်းလို့ – ( Facebook မှကူးယူပါသည်။ )
Posted by kai on Mar 31, 2013 in Copy/Paste, Think Tank |7comments
” အာဖ ရိကတိုက်က ရ၀မ်ဒါနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ တွတ်ဆီနဲ့ ဟူတူ လူမျိုးစု နှစ်စု အပြန်အလှန် မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေမျိုး မြန်မာနိုင် ငံမှာ ဖြစ်နေပြီလို့ သတင်းဌာနတစ်ခုက ပုံကြီးချဲ့ ထုတ်လွှင့်ခံရလောက်အောင် ရှက်စရာ စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။”
ဆာရာပေလင်းဟာ နောက်ဆုံးတော့ စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီး သူ့ကို အကြံပေးတွေက သင်ပေးတာတွေကိုလည်း နားမထောင်တော့ဘဲ ထင်ရာစိုင်းနေတော့တယ်။ ဒီအတိုင်းဆို သူ့ကြောင့် မက်ကိန်းကြီး ရှုံးတော့မယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းမိတဲ့ အနီးကပ်အကြံပေးတွေက သူ့ကို အားပေးတဲ့အနေနဲ့ “တလွဲပြောမိတာတွေအတွက် ခင်ဗျား စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့၊ ခင်ဗျားလိုလူ မပြောနဲ့၊ သမ္မတရော်နယ် ရေဂင်ကြီးတောင် တခါတလေ တလွဲတွေ ပြောခဲ့ဖူးတာပဲ။ ဥပမာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုဟာ သစ်ပင်တွေကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောင်းပြန်ကြီးကို ပြောဖူးတဲ့အထိ လွဲခဲ့တယ်။ နောက်တော့လည်း သမ္မတကြီး ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခါ လူချစ်လူခင်အများဆုံး သမ္မတကြီးတစ်ယောက်တောင် ဖြစ်သွားတာပဲ။ ခုလို လွဲတာတွေဟာ ပြသနာ မဟုတ်ပါဘူး”လို့ ပြောပြီး စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ပေးတော့မှ ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်လာတယ်။ ဘာပဲ ပြောပြော နောက်ဆုံးတော့ သူတို့အတွဲဟာ အိုဘားမားကို ရှုံးသွားတယ်။ ရှုံးရတဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာ ဗဟုသုတခေါင်းပါးလွန်းသူတစ်ယောက်
“၀န်ကြီးချုပ် ဦးနုဟာ ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘ၀ကစပြီး စာဖတ်တာမှာ ၀ါသနာမပါလှဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဗမာနိုင်ငံက ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာဆိုရင် ဦးနုဟာ ဗဟုသုတအလွန်ခေါင်းပါးသူတစ်ဦးဖြစ်တယ်။
အချိန်ရှိတုန်း ဗဟုသုတတွေကို ကြိုးစားပမ်းစား မစုဆောင်းခဲ့တာ အသက် ၄၀ နားနီးတော့မှ သူအကြီးအကျယ် နောင်တရနေတယ်။ လူတစ်ယောက်မှာ တောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့ ကိုယ်လက်အင်္ဂါရှိရုံနဲ့ မလုံလောက်သေးဘူး၊ ဗဟုသုတနဲ့ ပြည်စုံတဲ့ ဦးနှောက်ရှိဖို့လည်း အများကြီး လိုတယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ ဦးနု တဗျစ်တောက်တောက် ပြောနေတာ မကြာခဏ ကြားရတယ်။အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် အခုလို မကြာခဏ ပြောနေတာတွေဟာ တခြားကြောင့် မဟုတ်ဘူး၊ သူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်ပြီး သိပ်အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေတာ ကြောင့်ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဖိုးသုညဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု ထွင်လိုက်တဲ့စကားပါပဲ။ ဒီစကားကို ထွင်လိုက်တုန်းက ဦးနုဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါဘူး။ အချိန်ရှိတုန်းက ဗဟုသုတတွေ သူ မစုခဲ့မိတာ စိတ်နာနာနဲ့ သူ့ကိုယ်သူ သရော်ပြီး ထွင်လိုက်တာပါပဲ။” (တာတေစနေသား၊ စာ ၁၂၀)
မှံလိုက်လေ ဦးခိုင်… ရွာသားများလည်း အားအာလျားလျား ဂဇက်ဝင် ဂလေရိုက်မည့်အစား ဘဝအတွက် အသုံးဝင်မည့် စာ၊မူဗွီ (ဥမပါ – ဒေါက်တာချက်ကြီးဝက်ဆိုက်) ရှာကြံဖတ်ကြပါ။
ရ၀မ်ဒါနိုင်ငံ လောက်ကတော့ ဆူဒန်က ပျင်းတောင် ပျင်းသေးတယ်တဲ့။ ရ၀ပ်ဒါက ၅သိန်းနဲ့ ၁သန်းကြားပဲရှိတယ်။ ဆူဒန်က ပထမ ၅သိန်းအထက်
ဒုတိယအကြိမ် ၁သန်းနဲ့၂သန်းကြားဆိုလား။ အောက်က လင့်မှာကြည့် ကြည့်ပါ ခင်ဗျာ။
secondary source နော်..မှန်တယ် လို့ တို့မပြောဘူး။
ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ ဆိုတာကို အကြမ်းဖျဉ်း ကြားဖူးသလောက် ပြောရရင်တော့ အာရပ်တွေ ကုန်ကူးရင်း စိမ့်ဝင်လာတယ်..အေးဆေးပဲ
အေးဆေးပဲ..ဆူဒန်းနီးစ် များက ငါတို့မိတ်ဆွေများ ဟူ၍ ပျော်ကြ၏။ ၎င်းနောက်ဝယ်….တစ်နိုင်ငံလုံးကို ဘာသာပြောင်းရမယ်ဖြစ်ကရော။
အဲဒီမှာ ပြဿနာစတော့တာပဲ… ခရစ်ယာန်ဆူဒန်ုးနီးစ်များက ဘာသာမပြောင်းဘူးလည်း ဆိုရော genocide ဆိုတာကြီးပေါ်လာတာပါ ပဲဗျာ။
အမှန်တော့ အဲဒီဆူဒန်းနီးစ်များဟာ အင်္ဂလိပ်အုပ်စိုးတုန်းက အင်္ဂလိပ်ကိုတောင်ပြန်ခံတိုက်ခဲ့တဲ့ လူတွေ။ သိသလောက် အင်္ဂလိပ်ကနောက်ဆုံး
လွပ်လပ်ရေးပေးလိုက်ရတယ်ဆိုလား။ကြာပါပြီ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း မြောက်မြားစွာကပါ။ အဲကိုကို အာရပ်များနဲ့ကြမှ သေပြီဆရာ(စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်)တဲ့။
ချင့်ယုံဗျာ..ဒီက…မဖြစ်ညစ်ကျယ် ဖြုတ်ဦးနှောက်…မျောက်ဦးနှောက် လေးနဲ့ပြောတာပါ။အလုံးစုံ ဘယ်လိုတွေဖြစ်လည်း သိချင်ရင် ပရိုင်မရီစို့စ် ကို ရှာဖတ်ကြည့်ကြပါ ဟု မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။ ဂလုကတော့ မ၀ံ့မရဲလေးနဲ့ ပြောချင်တာပါ နော် နော်။ :eee:
ခရစ်ယန်နဲ့မွတ်ဆလင်ကြား နှစ်ထောင်ချီပြီးနာကျည်းမှုတွေနဲ့ အပြန်အလှန်ဖြစ်နေခဲ့..ဖြစ်နေဆဲ..ဖြစ်ဦးမှာတွေရှိပါတယ်..
ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲကြီးလည်းရှိခဲ့ဖူးတယ်..။ အမေရိကားနဲ့ဆို ၉။၁၁ ကနေ စပြီး.. အပြန်အလှန်ချေမှုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းဖြစ်နေဆဲပါ..။
ဒါတွေကို. အဲဒီအမုန်းတရားတွေကို.. မြန်မာလိုပြန်ယူပြီး မြန်မာလူထုကြားလာလာချနေတာတွေဟာ.. အကျိုးမရှိပါဘူး..
ချစ်ကြည်စွာနေထိုင်နေကြ..နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ လူမျိုးတူအချင်းချင်း.. တမြေထဲနေ..တရေထဲသောက်လူသားအချင်းချင်း.. ဘာသာရေးလူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုဖြစ်စေတာပါ..။
ဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေကြေအေး ငြိမ်းချမ်းအောင် ဘယ်လိုကူညီရမယ်..အားဖြည့်ရမယ်ဖက် ဦးတည်စေလိုပါကြောင်းရယ်လို့…။
သဂျီးရေ…ခရစ်ယန်နဲ့ မူဆလင်ကြား နာကျဉ်းမှုတွေ အကြောင်းကျွန်တော် စိတ်မ၀င်စားဘူး။ အရှိကို အရှိအတိုင်း တင်ပြခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူမှ အကြောင်းမဲ့ လူအချင်းချင်း သတ်ခြင်းဖြတ်ခြင်းကို စိတ်မ၀င်စားဘူး။
အဲဒါပေမဲ့..ဘယ်သူမှလည်း အသတ်ခံချင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သို့သော်လည်း…သတိဆိုသည်မှာ..ပိုသည်မရှိပါ။ သူကြီးဖျက်သင့်တယ် ထင်ရင် လုံးဝဖျက်ပလိုက်လေ။ မျဉ်းကြောင်းကြီး ကန့်လန့်ဆွဲထားတော့ တစ်ခြားလူတွေက မဖတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့လား။ မညီညွတ်ဘူးထင်ရင် လုံးဝဖျက်ပစ်လိုက်လေ။ ဘယ်တုန်းကမှ တစ်ဖက်သတ် သူတစ်ပါးကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကို ပုတ်ခတ်စွတ်စွဲ ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘာသာရေးခုတုန်းလုပ်ပြီး လူတွေကို
ဒုက္ခပေးနေသူများ အကြောင်းကိုသာ သိထားသင့်တယ် ယူဆပြီးပြောတာမျိုးတော့ရှိလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ပြောထား
တယ်လေ ကြားဖူးတာပြောပါတယ်လို့။ ချင့်ယုံပါ။ source ကလည်း secondary source သာဖြစ်ကြောင်း ပြောထားတယ်လေ။ လူသားများပဲ တိရိစ္ဆာန်တွေမှ မဟုတ်တာ သူတို့မှာ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဥာဏ်ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ် သဂျီး။ လူကို လူလို့မြင်ခြင်းပါပဲဗျာ။ မမှန်ရင် သူတို့လက်ခံ ပါ့မလား? အဲတစ်ခုတော့ပြင်ချင်တာက ခရစ်ယာန်ကိုပဲဖိနှိပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ animists တွေကိုလည်း ဖိနှိပ်တယ်ထင်ပါတယ်။ အဲနောက်ဆုံးပြောချင်တာက ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ အထဲမှာ အာရပ်တွေက ဘာ ဘာသာဝင်တွေလည်း ဆိုတာတောင် မပြောထားဘူးနော်။ သဂျီးဘာသာသဂျီး ဘာစစ်ပွဲ ညာစစ်ပွဲ လို့ ပြောတာနော်။ ပဋိပက္ခငြီမ်းအေး ဖို့အတွက် နွားသတ်တဲ့ကိစ္စက အစ အဆင်ပြေစေမဲ့ နည်းလမ်းတွေတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်။
နွား ကြောင့် မီးမလောင်စေနဲ့ဆိုပဲ။ နွားကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စမဟုတ် ဒီထက်ပိုဆိုးတဲ့ အဖြစ်အပြက်တွေကြောင့် ဆိုတာမသိလို့လား။ ပြီးတော့ ဒီနွားကိစ္စက ကိုရှေ့ဆက်တက်တာမရှိ နွားနဲ့တင်တ၀ဲဝဲလည် ဆွေးနွေးခြင်းလည်း မမြောက်။
နွားဋီကာဖွင့်ကာရယ် သောက်စားကြူး ကိုဘေးနွားကြီးကို မျိုကာရယ်ဖြင့် . အဲတစ်ခုတော့သိချင်တယ် ဘယ်နေရာလေး မှာဘယ်စည်းကမ်းနဲ့ ငြိနေတာလဲ???? ကျေးစ်
ပြောဖို့ မေ့သွားတယ်“ဘယ်သူမှ”ဆိုတာ ရွာထဲကလူတွေကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း “လူအများစုဟာ” လို့ ပြန်ပြင်၍ ဖတ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ :harr:
ဒါဆို နွားမုန်းတီးရေး ဝါဒဖြန့်နေတဲ့ သဂျီးလဲ ရပ်လဗျာ…။ :saut:
why ? who?????